TONTOLON’NY RASTA : Hamitram-pihavanana amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpitsara
Mifanindra an-dalana amin’ny fahatsiarovana ny datin’ ny 11 mey nahafatesan’ingahy Robert Nesta Marley, na i Bob Marley ity hetsika atao ity. 10 mai 2019
Iantsoan’izy ireo ny mpandaraharaha ny fonja, ny mpitsara, ny polisim-pirenena, ny zandary ary ireo ankolafin-kery rehetra misy eto Mahajanga. Izao no atao, hoy i Serge Brown, masoivoho ny rastaman aty anivon’ny ranomasimbe indianina dia hialana amin’ny elanelana misy amin’ireo rasta mitondra volo lava ka atahoran’ny fiarahamonina.
Misy koa ireo mpitandro filaminana sy ny mpitsara avy hatrany dia managadra ireo rasta voaendrikendrika any anivon’ ny fiarahamonina any. Ny rasta anefa, hoy i Serge Brwn, dia mandala ny foto-pisainana ny maha-olona, ka mitandro ny fandriampahalemana sy ny fahamarinana fa tsy voatery ho ratsy avokoa izy ireo. Saingy kosa toy ny olon-drehetra miaina any anivon’ny fiarahamonina rehetra any, dia tsy ferana ny saonjo iray lohasaha ka tsy ilaozan’izay hamarara.
Sambany izao araka ny fifanarahana iraisan’ireo nosy miisa enina aty amin’ny faridranomasin’ny oseana indiana no hanao ity fifamitranam-pihavanana amin’ireo mpitandro filaminana sy ny mpitsara ireto rasta ireto, hoy ity masoivohon’izy ireo ity.
Ny sabotsy 11 mey ho avy izao no hanatanterahana io hetsika fifamitranam-pihavanana io, ao amin’ny resto- chez Cathy, eny Ambondrona, iarahana amin’ireo mpanakanto maro mivoy ny gadona "reggae". Ahitana an’i Herman rasta, Samy rasta fanahy, i Jasty sy ireo maro hafa ihany koa. Izay sady andro ahatsiarovana ny faha 38 taona nahafatesan’ilay mpanjakan’ny reggae, dia i Bob Marley izany hetsika atao izany.